Nepal Mamila | नेतृत्व चयन गर्दा होस नपुर्‍याउने अनि काँग्रेसले काम गरेन भनेर गुनासो गर्ने ? : प्रकाशमान सिंह - Nepal Mamila नेतृत्व चयन गर्दा होस नपुर्‍याउने अनि काँग्रेसले काम गरेन भनेर गुनासो गर्ने ? : प्रकाशमान सिंह - Nepal Mamila
हेटौडा । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको नेतृत्व चयन गर्दा ध्यान पुर्‍याउन कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । बिहीबार हेटौडामा भएको काँग्रेस बागमती प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै नेता सिंहले नेतृत्वकै कारण पार्टी कमजोर अवस्था पुगेकाले नेतृत्व चयन गर्दा ध्यान पु¥याउन आग्रह गरेका हुन् ।
नेत सिंहले भने, ‘नेतृत्व चयन गर्दा होस नपुर्याउने, अनि काँग्रेसले काम गरेन भनेर गुनासो गर्ने ? नेतृत्वकै कारणले पार्टी कमजोर अवस्थामा आएको छ । नेतृत्व चयन गर्दा तपाईहरुले ध्यान दिनु पर्दछ ।’
त्यसैगरी नेता सिंहले काँग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी गर्दा पनि जनताले नेतृत्वकै कारण भोट नदिएको पनि बताए । ‘संविधान जारी गरी जनतामा जाँदा दुई तिहाई त काँग्रेसले पाउनु पर्ने हो । तर कम्युनिष्टहरुले प्राप्त गरे ।’ नेता सिंहले भने ।
काँग्रेसले संविधान जारी काँग्रेसले संस्थागत तथा लागू गर्ने जिम्मेवारी पनि काँग्रेसमा नै रहेको उनले टिप्पणी गरे । जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तन हुन अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो ।
समयमा नै ख्याल नगरे लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा रहेको सिंहको जिकिर थियो ।
अब देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने समय आएको भन्दै त्यसको नेतृत्व पनि काँग्रेसले नै गर्नुपर्ने नेता सिंहले बताए । काँग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव भएको उनको दाबी गरे । जनताको जिवन र जिविको पार्जन सहज बनाउनको लागि आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा उनको जोड छ । अबको अर्थिक क्रान्ति जनताको स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए ।